Konke odinga ukukwazi ngomkhawulo weRoche | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isathelayithi yethu, iNyanga, itholakala ebangeni elijwayelekile lamakhilomitha angama-384.400 ukusuka eMhlabeni. Unyaka ngamunye isuka ngamasentimitha angu-3,4. Lokhu kusho ukuthi ngokuhamba kwezigidi zeminyaka inyanga ingayeka ukuba yisathelayithi yethu. Yini ebingenzeka uma isimo besiphambene? Lokho wukuthi, uma inyanga isondela kancane kwiplanethi yethu minyaka yonke. Leli qiniso laziwa njenge Umkhawulo weRoche. Uyini lo mkhawulo weRoche?
Kule ndatshana sichaza konke ngakho.
1 Uma inyanga isondele emhlabeni wethu
2 Imiphumela yamandla adonsela phansi kumkhawulo weRoche
3 Umkhawulo kaRoche nabantu
Uma inyanga isondele emhlabeni wethu
Okokuqala, kufanele kushiwo ukuthi lokhu kuyinkohliso ngokuphelele. Inyanga ayinandlela yokusondela emhlabeni wethu, ngakho-ke lokhu konke ukuqagela. Eqinisweni, empeleni, inyanga izoqhubeka nokuqhubekela phambili kude noMhlaba unyaka nonyaka. Ake sibuyele emuva esikhathini lapho iplanethi yethu yayisanda kwakhiwa futhi umzila obukuwo isathelayithi yethu owawukuwo wawusondele kakhulu kunamanje. Ngalesi sikhathi ibanga phakathi kweplanethi nesathelayithi lalilincane. Ngaphezu kwalokho, uMhlaba waziphendukela ngokwawo ngendlela esheshayo. Izinsuku zazingamahora ayisithupha kuphela, futhi inyanga yathatha izinsuku eziyi-17 kuphela ukuqeda ukuzungeza okugcwele.
Amandla adonsela phansi anikezwa yinyanga yikhona okwakuphethe ukwehlisa ukuzungeza kwawo. Ngasikhathi sinye, amandla adonsela phansi afakwa yinyanga kwiplanethi yethu yiwo abekade anciphisa ukujikeleza. Ngalesi sizathu, namuhla izinsuku eMhlabeni zinamahora angama-24 ubude. Ngokuhlala ngamandla we-angular wohlelo, yinyanga ebilokhu isuka kude nathi isinxephezelo.
Ukonga umfutho we-angular kuyinto ebalulekile ukuyigcina kuzo zombili izinkomba. Uma inyanga ithatha isikhathi esingaphezu kosuku ukuzungeza, umphumela uyofana nalokhu esikubonayo lapha. Okusho ukuthi, ukuzungeza kweplanethi kubambezela futhi nesathelayithi iyasuka ukuze iyikhokhele. Kodwa-ke, uma inyanga ijikeleza yona uqobo izokhiqiza umphumela ohlukile: ukuzungeza kweplanethi kuzoshesha, izinsuku ezihlala isikhathi esincane futhi nesathelayithi izosondela nakakhulu ukunxephezela.
Imiphumela yamandla adonsela phansi kumkhawulo weRoche
Ukuze sikuqonde lokhu, kudingeka sazi ukuthi amandla adonsela phansi aba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe uma sisondela ngokwanele. Kukhona iphuzu lapho konke ukuhlangana kwamandla adonsela phansi kuhlangana khona. Lo mkhawulo waziwa njengomkhawulo weRoche. Imayelana nomphumela into enayo lapho isekelwa amandla ayo adonsela phansi. Kulokhu, sikhuluma ngenyanga. Uma inyanga isondela kakhulu kwenye into ukuthi amandla adonsela phansi angagcina ekhubazekile futhi ayiqede. Lo mkhawulo weRoche usebenza futhi ezinkanyezini, ama-asteroid, amaplanethi neziphuphutheki.
Ibanga eliqondile lincike kubukhulu, usayizi, kanye nobukhulu bezinto zombili. Isibonelo, umkhawulo weRoche phakathi koMhlaba nenyanga ngamakhilomitha angama-9.500 XNUMX. Lokhu kucatshangelwa ngokuphatha inyanga ejwayelekile kusuka kuleyo eqinile. Lo mkhawulo usho ukuthi, Ukube isathelayithi yethu ibingaba ngamakhilomitha angama-9500 noma ngaphansi, amandla womhlaba adonsela phansi abengathatha awayo. Ngenxa yalokho, inyanga yayizophendulwa indandatho yezingcezu zezinto ezibonakalayo, ziphihlizeke ngokuphelele. Izinto zokwakha zizoqhubeka nokuzungeza umhlaba zize ziqede ukuwa ngenxa yomphumela wamandla adonsela phansi ebusweni. Lezi zingcezu zezinto ezibonakalayo zingabizwa ngokuthi ama-meteorites.
Ukube inkanyezi enomsila ibikude ngaphansi kwamakhilomitha ayi-18000 ukusuka emhlabeni ibizogcina iphazanyiswe amandla adonsela phansi. Ilanga liyakwazi ukwenza umphumela ofanayo kepha ngebanga elikhulu kakhulu. Lokhu kungenxa yobukhulu belanga uma kuqhathaniswa neplanethi yethu. Kukhudlwana usayizi wento, kukhula amandla adonsela phansi. Lokhu akuyona nje inkolelo-mbono, kepha ukubhujiswa kwama-satellite ngamaplanethi abo kuyinto ezokwenzeka e uhlelo lwelanga. Isibonelo esaziwa kakhulu salokhu ngesikaPhobos, isathelayithi ezungeza i- iplanethi iMars nokuthi lokho ikwenza ngejubane elisheshayo kuneplanethi uqobo lwayo.
Ngaphakathi komkhawulo weRoche, ubukhulu bento encane kunazo zonke engakwazi ukubamba isakhiwo sayo ndawonye. Ngakho-ke, njengoba into isondela kumkhawulo wendlunkulu yaseRoche ethinteke kakhulu ngamandla adonsela phansi eplanethi. Lapho weqa lo mngcele iminyaka eyizigidi eziningana kusukela manje isathelayithi izophenduka indandatho yezingcezu ezizungeza iMars. Lapho zonke izingcezu sezizungeze isikhathi esithile, zizoqala ukugcwala ebusweni bomhlaba.
Esinye isibonelo sento engacishe ibe semkhawulweni weRoche, yize ingaziwa kangako, iTriton, isathelayithi enkulu kunazo zonke emhlabeni. Neptune. Okucishe kube ngaphansi kulinganiselwa ukuthi cishe eminyakeni eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-3600 kungenzeka izinto ezimbili njengoba le satellite isondela kumkhawulo weRoche: ingawela emkhathini weplanethi lapho izoncibilika khona noma iyoba isethi yezingcezu zezinto ezifana nendandatho iplanethi enayo Saturn.
Umkhawulo kaRoche nabantu
Singabuzwa lo mbuzo: kungani iplanethi yethu ingasibhubhisi ngamandla ayo kubhekwa ukuthi singaphakathi komkhawulo weRoche? Yize kungenzeka ukuthi kube okunengqondo, kunempendulo elula. Amandla adonsela phansi abamba imizimba yazo zonke izinto eziphilayo ndawonye ebusweni bomhlaba.
Lo mphumela awunanzuzo uma uqhathaniswa nezibopho zamakhemikhali ezibamba umzimba ndawonye. Isibonelo, la mandla agcinwa yizibopho zamakhemikhali emzimbeni wethu anamandla kakhulu kunamandla adonsela phansi. Eqinisweni, amandla adonsela phansi angenye yamandla abuthakathaka kakhulu phakathi kwawo wonke amandla endaweni yonke. Iphoyinti lapho amandla adonsela phansi azodingeka kakhulu, njengakwi-a umgodi omnyama sengathi ukwenza umkhawulo weRoche ukwazi ukunqoba amandla ahlanganisa imizimba yethu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngomkhawulo weRoche.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Umkhawulo weRoche